DHAGEYSO Degmada Waabri oo ku guulaysatay Koobka degmooyinka gobolka Banaadir. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Degmada Waabri oo ku guulaysatay Koobka degmooyinka gobolka Banaadir.
Waxaa xalay magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya ka dhacday ciyaarta kama danbaysta ah ee degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ku kulmeen labada kooxood oo kala matalaysay degmooyinka Waabari iyo Shibis.
Kabtanka xulka degmada Waabari ee gobolka Banaadir ayaa hambalyo u diray kooxdiisa wuxuuna sheegay inay rajaynayaan in guushaan oo kale ay snaadka danbe gaari doonaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay xulka degmada Waaberi hanashada Koobka degmooyinka gobolka Banaadir oo sannadkii 2-aad oo xiriir ah ay Waabari ku guuleystay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ammaanay xulka degmada Shibis iyaguna soo gaaray ciyaarta kama dambeysta ah wallow laga guulaystay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shahaadooyin maamus ah guddoonsiiyey qaar ka mid ah taliyeyaasha Ciidamada Booliska ee ku hawlannaa tartanka tan iyo markii uu bilowday, wuxuuna ku bogaadiyey sida ay u muujiyeen nabadda iyo horumarka ka jira Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa dhankiisa u mahadceliyey wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumada fedraalka Soomaaliya, masuuliinta heer Federaal iyo heer gobol ee kaalinta kulahaa qabsoomidda Koobka degmooyinka gobolka Banaadir.
Ciyaarta kama dambeysta ah ee degmooyinka Gobolka Banadir oo xilli habeennimo ah la qabtay ayaa waxaa ka soo qeyb galay kumannaan ka mid ah shacab ku nool caasimada iyo masuuliyiinta dowlada oo uu madaxweynuhu ugu horeeyay, kooxda matalaysay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaana 1:0 kaga guuleysatay dhigooda degmada Shibis.
← Qaar ka mid ah taliyeyaasha ciidamada degmooyinka gobolka Banadir oo xilalkii laga qaaday.
Guddiga IEBC oo beeniyay in shaqada laga ceyriyay madaxii fulinta →